Tarika Mahaleo : FAMPISEHOANA 40 ETO AN-TOERANA SY ANY IVELANY HO AN’NY 45 TAONA -
AccueilSongandinaTarika Mahaleo : FAMPISEHOANA 40 ETO AN-TOERANA SY ANY IVELANY HO AN’NY 45 TAONA
Tarika Mahaleo : FAMPISEHOANA 40 ETO AN-TOERANA SY ANY IVELANY HO AN’NY 45 TAONA
15/02/2017 admintriatra Songandina 0
Raikitra amin’izay. Hosantarina etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina amin’ilay fampisehoana “Isekely” ny alahady ho avy izao ny faha-45 taonan’ny tarika Mahaleo. Seho santatra ihany io fa fampisehoana manodidina ny 40 no efa voafaritra fa hanamarihana izany eto an-toerana sy any am-pitan-dranomasina. “Ny 30 amin’ireo dia eto an-toerana fa ny 10 kosa ho an’ireo havana, tapaka sy namana any dilambato”, araka ny fanazavan’i Dama. Mandritra ireo fampisehoana ireo dia hisy hatrany ireo hira vaovao mbola tsy henon’ireo mpankafy. Toa izany koa anefa ireo hira tsy vaovao nefa tsy nokaloin’ny tarika matetika ary hibahan-toerana amin’ny fampisehoana kosa ireo hira tsy afaka am-bavan’ny besinimaro ary hiarahana mikalo amin-dry Dama sy ny tariny eny an-tsehatra.
Tafiditra amin’ny fankalazana ny faha-45 taona ny nivoahan’ny “boky Mahaleo” izay ahitana ireo hiran’ny tarika. Hozaraina maimaim-poana amin’ireo tsara vintana io boky io ka ny marika zava-pisotro Thb no hikarakara izany. Mialoha ny fampisehoana no hanaovana ny fizarana izany boky izany. Mialoha izany anefa dia nisy ihany koa ny lalao tao amin’ny tranonkalan’ny marika Thb izay nahazoan’ireo tsara vintana tapakila ho an’ny fampisehoana. “Ilay tapakila eo ihany fa ny fahitana mivantana ny tarika Mahaleo no tena zava-dehibe”, araka ny fanazavan’ny iray tamin’ireo tsara vintana, naka ny volany tetsy amin’ny foiben’ny orinasa Star Andraharo omaly.